မဟာ ကရုဏာတော်၏ ပြင်ပဧရိယာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » မဟာ ကရုဏာတော်၏ ပြင်ပဧရိယာ	15
မဟာ ကရုဏာတော်၏ ပြင်ပဧရိယာ
Posted by ကျော်စွာခေါင် on May 16, 2015 in Arts & Humanities, Poetry | 15 comments
မသေချာတဲ့ ပြဌာန်းမှုတွေနဲ့ 
မိုးခါးရေတွေ စီးဆင်းနေတဲ့ ကမ္ဘာ…။
မြင့်ရာက နိမ့် ရာစီးတဲ့ မြစ်ချောင်းတွေလို
မာသာထရီဇာ လက်ဦးအောင် မဖန်ဆင်းခဲ့ပါလိမ့်…။ ။
( ပန်းချီကားအမည်…မဟာ ကရုဏာတော်၏ ပြင်ပဧရိယာ…။ ဆီဆေး )
မြစပဲရိုး says: ဒီ…ကမ္ဘာ.. ဒီ..စကြဝဠာ မှာ မာသာထရီဇာ တစ်ယောက် ကိုတော့ ဖန်ဆင်းထားခဲ့ ပြီး ပါ ပန်းချီဆရာ ရေ။
အဲဒီလို မာသာထရီဇာ တွေ ပိုများ များ မလာတာ ကတော့ ဒီ…ကမ္ဘာ.. ဒီ..စကြဝဠာ ကြီး ရဲ့ ပေါ့ဆမှု ဘဲ ထင်ပါရဲ့။
အဲဒီ ကလေး နှစ်ယောက် ပုံလေး ကို မှတ်မိနေပါတယ်။
ကျော်စွာခေါင် says: အရီးခင်
ကမ္ဘာကြီးကဘဲ အဆိုးဘက်ကို အားပြုပြီး ၂၃ ၁/၂ံလည်ပါတ်လို့ လားမသိတော့ပါဘူး အရီးရယ်..
မာသာထရီဇာ လို လူမျိုး ထပ်မမွေးတာထက် ….
မာသာထရီဇာလို နှလုံးသားမျိုး လူတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ မွေးဖွားစေချင်တာပါ…။
မိန်းမဆင် ချိတ်တောင်ရှည်ကြီးတွေက မာသာဝတ်တဲ့အဖြူရောင်လောက် အရောင်အဆင်း မရှိတော့လဲ..
မိကွဲ…ဖကွဲ ..လူဆင်းရဲတွေနဲ့ကြေကွဲစရာတွေ ဖြစ်ရတာပေါ့..။
ခင်ဇော် says: ခေါင်
ခုတလော ပိုသိလာတာကတော့ လူတွေ စိတ်က ပိုယဉ်ကျေးးမြင့်မားးလာတာမဟုတ်ပဲ
ကောင်းးမွန်တဲ့ ဘာသာရေးး, သိမ်မွေ့တဲ့ စံနစ်, စည်းးကမ်းး, ဥပဒေ, မြင့်မားးမှု level တွေကြောင့်မို့သာ
လူသားးတွေ ရဲ့ evil-minded character တွေကို အနည်းးနဲ့ အများး ထိန်းချုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာပါပဲ…!!
ကျော်စွာခေါင် says: ဆွိ..ရေ..
ဆွိ အတွေးကော်မန့် ကို ဖတ်မိတာနဲ့ ..မျက်စေ့ထဲမှာ ကြက်ဥ ၁လုံးကို မြင်မိတာဘဲ..
သဘာဝဘေးဒါဏ်တွေ လုံခြုံနိုင်အောင် အရည်ကြည်ဘဝက စလို့ကြက်ဥအကာက ကာကွယ်ပေးပေမယ့် ရုန်ကန်နိုင်တဲ့ အသိစိတ်
ရယ် လှုပ်ရှားနိုင်မှုရယ် ပေါင်းစပ်လာတဲ့အခါ သူ့ ကို လုံခြုံစေခဲ့တဲ့ အကာကို ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးပြီး ထွက်လာတော့တာဘဲ..။
လူ့ ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းမှာလဲ အကြောက်တရားကြောင့် အားကိုးမှုအနေနဲ့ ဘာသာရေးကို အကာအကွယ်ယူတယ်..
ကြက်ဥအကာထဲမှာဘဲ နေပြီး သေရမယ် မဆိုလိုဘူးနော်..
ဥကပေါက်တာခြင်းအတူတူ…သူများကို အနိုင်ကျင့်ပြီးဆိတ်လိုက်မယ်..ခွပ်ချလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး မမွေးဘို့ ပါဘဲ..။
kai says: မနေ့တနေ့ကတင်.. ယူအက်စ်ရဲ့Pewဆာဗေးထွက်လာတာမို့.. ဆာဗေးအရ…… အမေရိကနေ…အမေရိကန်တွေ… ဘာသာပျောက်ကုန်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း..။
ကျုပ်ကတော့… နောင်အနှစ်၅၀အတွင်း ကမ္ဘာ့ကိုးကွယ်ရာဘာသာကြီးတွေ အကုန်… ဤကမ္ဘာမြေက… ပျောက်ကုန်မယ်လို့… မှန်း…။ စကားစပ်…
ဆရာခေါင့်ပုံတွေ.. ဥရောပအငွေ့တွေတော်တော်ပါတယ်… ထင်နေမိ…။
ပညာခန်းလေး..အလျှင်းသင့်ရင်.. ပြောပါဦးနော..။ =
USA TODAY-May 11, 2015
That’s the top finding — one that will ricochet through American faith, culture …. right,” crowed David Silverman, president of American Atheists.
Christianity is losing ground in the United States as atheism and …
Raw Story-May 12, 2015
Newsmax-May 12, 2015
Poll: Christians decline in US while atheists and agnostics soar
Inland Empire News-May 12, 2015
Highly Cited-Pew Research Center’s Religion and Public Life Project-May 11, 2015
Christians drop, ‘nones’ soar in new religion poll
In-Depth-Detroit Free Press-May 12, 2015
ကျော်စွာခေါင် says: သူကြီး…ခိုင်
… ပုဂံဘုရားတွေ ရှိနေတာဟာ…အနော်ရထာ ရှိနေတာမဟုတ်ဘူး…
မန်းလေးနန်းတြော်ကီးအခုရှိနေတာနဲ့ မင်းတုန်းမင်းနဲ့သီပေါမင်း ရှိနေတယ်လို့ ထင်လို့ မရဘူး..
ပြယုတ်တွေ ကောင်းပေမယ့် … အနှစ်သာ၇ မဲ့နေရင် တန်ဘိုးကျတာပါဘဲ..။
တစ်ခုခုသောအရာ ပျောက်ဆုံးပျောက်ကွယ် မှေးမှိန်သွားခြင်းဟာ… တန်ဘိုးကျဆင်းပြီး…တန်ဘိုးလျှော့လာလို့ ဘဲလေ..။
ပန်းချီကားထဲက ခပ်ဝါဝါ အရောင်လေးကို ဖယ်ထုတ်ချင်ပေမယ့်..
စစ်ပွဲတစ်ခု ..အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် မိမဲ့ ဖမဲ့..ငတ်နေတဲ့ ခလေးနောက်က အဝါရောင်ကို..
သာသနာ့နယ်ပယ်က အရောင်တစ်ခုလို့တွေးမြင်ကြည့်လိုက်ရင်….
မန်းလေးနန်းတော်ရှိပေမယ့် သီပေါမင်း မရှိတော့ဘူး…
အဲဒိ အဝါရောင်လေးကို စိတ်နဲ့ မေးကြည့်ပါ သူကြီး…
နှစ် ၅၀ က များသလားလို့ …။
Alinsett @ Maung Thura says: ဒီကမ္ဘာကတော့ … ဒီကမ္ဘာပါပဲ…
ကျော်စွာခေါင် says: ဒီကမ္ဘာကတော့ ..ဒီကမ္ဘာပါဘဲ…
lu lu says: ပန်းချီ ပုံကိုမြင်တော့
မပြည်စုံတဲ့ ဘဝတွေကို ပြေးမြင် မိတယ်
ကျော်စွာခေါင် says: လုလုရေ..
မပြည့်ဏုံမှုတွေရဲ့ နောက်ကွယ်ကို ကြည့်ရတာက ပိုစိတ်ဆင်းရဲတယ် လုလု။
Ma Ma says: အမဖြစ်တဲ့ ကလေးမလေးရဲ့ ဟန်ပန်ပုံစံက အသက်ဝင်သလို
မောင်လေးဖြစ်တဲ့ ကောင်လေးရဲ့ မျက်စေ့ကလည်း ပီပြင်ပါပေတယ်။
မဟာဂရုဏာတော်၏ပြင်ပ လို့ နာမည်ပေးလိုက်တာကတော့ ပန်းချီကားရဲ့ ရသကို အမြင့်ဆုံးထိရောက်အောင် မြှင့်တင်ပေးလိုက်နိုင်တာပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 754
ကျော်စွာခေါင် says: မမ
မဟာဂရုဏာတော်၏ပြင်ပ လို့ နာမည်ပေးလိုက်တာကတော့ ပန်းချီကားရဲ့ ရသကို အမြင့်ဆုံးထိရောက်အောင် မြှင့်တင်ပေးလိုက်နိုင်တာပဲ။ …
ပန်းချီကားအမည်မှာ ရည်ရွာ်မှုတွေ အများကြီးပါပါ တယ်..။
sorrow says: မဟာဂရုဏာတော်၏ပြင်ပဧရိယာ … နာမည်လေးက အတော်တာသွားဗျ… စဉ်းစားတတ်ပါ့ဗျာ…
အောင် မိုးသူ says: အချို့က အတ္တကို ရွှေချထားတယ်
အချို့က နှလုံးသားကို တန်ဖိုးထားတယ်
Mike says: .ဒီပုံလေးကိုတစ်ခါမြင်ဖူးတယ်..ပုံနာမည်တော့ခုမှသိရတာ